Rocket League: Game for Wonke	script Cookie kwemvume
Popular Posts Burstfire Code License Steam Free	Hey hackers we have a new tool for you, this time is Burstfire CD Key Generator Hack... Wembule To You by Sylvia Day - PDF Free eBook	Le ncwadi umsebenzi eqanjiwe ... I am Isinkwa Free CD Key Generator 2015	Sethula kuwe entsha futhi olusha mina am Isinkwa Free CD Key Generator .... Abaphakanyisiwe Okuxhunyanwa Nabo 2 CD Key Generator 2016	Thwebula zakamuva Abaphakanyisiwe Okuxhunyanwa Nabo 2 cd generator key and zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd .... PES 16 Free CD KEY (Keygen Tool)	Wena nje okumbalwa kude ukufuya siqu kakhulu Pro Evolution Soccer yakho 2016 CD Product Key ... Transformers: Incithakalo CD Key Generator 	Thwebula Transformers zakamuva: Incithakalo umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Planetbase CD Key Generator Ithuluzi 	Thwebula Planetbase zakamuva umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Okumpunga Dungeon CD Key Generator 2016	Thwebula yakamuva Okumpunga Dungeon ukhiye cd generator zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd .... The Sims 4 CD Key Generator	Why spend your cash when you can get The SIMS 4 CD Key on this website easy and free!On this site you can use our The SI... Hurtworld Gameplay Isiqophi 2016	Hurtworld kuyinto hardcore basinde yabadlali FPS okugxile ejulile okusinda ukuqhubekela phambili ukuthi akubi o eziwubala ... War Thunder CD Key Generator 2016	Sethula kuwe entsha futhi olusha War Thunder CD Key Generator .... The Last Guardian CD Key Generator	Thwebula yakamuva The Last Guardian ukhiye cd generator zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd .... Umlotha Singularity CD Key Generator	Thwebula Ashes yakamuva ye Singularity umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Worlds Lego Code Generator	Sethula kuwe entsha futhi olusha Lego Worlds Code Generator .... Izinja ezigadayo 2 CD Key Generator 2017	Thwebula zakamuva Watch Dogs 2 umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Rocket League: Game for Wonke
Posted in Izindaba	2015-07-13
Free ngokusebenzisa PlayStation Plus kule nyanga, uma kungukuthi ukudlala Rocket League, ubhekene uphuthelwa phakathi kunakho Downloadable isiqophi imidlalo lokuteleka yimuphi platform kuze kube manje kulo nyaka.
Ngiyaqonda ukuthi isitatimende ukhombise impilo kakhulu, kodwa kungcono ngokuphelele kufanele babe. Phakathi izinto zami encomekayo ngalokhu wokuzilibazisa crazy yethu wukuthi, zonke manje bese, a game kakhulu amahlumela up kuwe bese ubeka a hila hang on sonke isikhathi sakho ngokuphelele khulula. Yilokho kanye Rocket League akwenzele eyakho ngobuqotho, ukuxuba a pair of imibono Ngithathe bezazi in indlela brand-new ngesibindi, ke uphole yonke othandeka off nge Izilawuli tight and ngaphezu izingwegwe kancane ngokwanele ukuba agcine kimi Niyosindiswa ngokuba more.
Okuvela iqembu Psyonix, Rocket League yiyona zokulandelisa ngezizukulwane odlule Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars. Nakuba uhlobo kujabulise ukusho, umusa yokuqala iqembu Psyonix wenza ngokwabo enikeza Rocket League igama lokho nobungane kude olimini kulula ukukhumbula. Otherwise, siyakucela kokuxoxa 2 emidlalweni efanayo ngempela: Soccer, Nokho esikhundleni abantu udlala njengoba izimoto.
In Rocket League, ungakwazi iqhaza emidlalweni esukela 1v1 on okuningi njengoba 4v4. Udlala enkundleni ngezingange eziphakemeyo ukuthi ungakwazi ngempela ukushayela kanye, futhi ibhola ihlobene kabili ubukhulu izimoto. At noma ekupheleni iphimbo umgomo bese ucondzanisa last five minutes. Yilokho kukhona kuwo. Akukho zinqubomgomo nenhle ukuthola, akukho izikhali ukuthi ungakwazi nomlilo at izitha zakho, bamane izimoto edwengula emhlabeni insimu, kuhloswe ukuba sisebenzise izimoto zabo ukuba knock ibhola lenkhulu ibe umgomo.
Rocket League: Wonke umuntu Okufanele ukudlala lo mdlalo
Uma kuziwa ukuzilawula phezu kwalabo izimoto, Psyonix uye ngokuchachileyo itshale lokunengi isikhathi kokuqinisekisa ukuthi lezi zingane ezimbi bazizwa fantastic ukushayela. Izilawuli kuqinile, futhi unethalente ibhuleki lesandla ngakwesokunene uma kufanele baguquke on a Dime. Ungase futhi ushaye X bagxume, futhi ukulisebenzisa waphinda ukunikela ngezimoto yakho yokukhweza sendawo lokho kakhulu ngoba ezihambayo ibhola kanye ngokushesha noma ukuthatha isibhamu on umgomo.
Lapha ungakwazi ukuthola Free CD KEY for Rocket League: Chofoza ukuze Thwebula Rocket League Product Key
Nakuba azikho izikhali ngqo, iphimbo is onezinto panel kancane ukuthi angakwenza zokuthuthukisa. Ukusebenzisa umfutho wakho hit ibhola nzima noma uhlanga ibe wenze ukonga bamba, noma ungakwazi ngempela zigcineleni 100 ngamaphesenti angu futhi umzamo ukuze hit inhloko-on inselele, Kanjalo kokulimaza ngezimoto zabo futhi ekuqedeni nabo kusukela game for nedlanzana imizuzwana. Lokho akulona cishe lula njengoba noma avamile njengoba ungase ucabange. Yilokho a target inhliziyo super-fast ukuthi udinga ukuba hit ngejubane, phela.
Uma kuziwa ikhamera electronic, Psyonix enengqondo efakwa pair of izinhlelo esikuvumela kalula unake the game video noma ngaphambi komgwaqo. Ikhamera okuzenzakalelayo isiqophi isethwe ukulandela ibhola, okuyilapho nginendawana ukusigcina ikhiyiwe kulo emidlalweni. Ngesikhathi push inkinobho, however, ungakwazi kweso ukushintshela nombono ngemuva-the-car, uma ufisa ukuba ukhumbula isimo sakho kuka lapho ibhola iyona ngomzuzu.
Rocket League inama okukhulu izinhlelo lula ezisebenza ngokuphawulekayo, okuletha ezimbalwa kujabulise kakhulu engake ngaba nayo PlayStation yami 4 wonke unyaka. Ukwenza umdlalo isiqophi isihloko Plus kwakungomunye unhlangothi yokucabanga smart, njengoba izimoto edlala ibhola kungenzeka a ethengisa kanzima abadlali ejwayelekile. Faka it in the Instant Game Collection, though, futhi ongakuqondi ngingalindele got a izilaleli elikhulu ukuthi, okungenani, ngeke cishe ahlinzeke umdlalo ividiyo a shot.
Ngakho, kungani lokhu nje izandla on kusengaphambili umdlalo ividiyo esikhundleni ukubukezwa okuphelele? Ngoba Ngithathe ngokuyisisekelo umlutha imodi eyodwa futhi ungazange kwadingeka ithuba ungene okuningi ngisho nangokwengeziwe kulo mdlalo nje okwamanje. Ngilokho Sengike ngakubona, though, Ungihola ukucabanga ukuthi Rocket League a plan pretty eziqine, ukuhlinzeka lakhetsiwe ezibanzi oyenze ukuvula futhi izindlela ukuze sizike isikhathi sakho zibe.
Uyabona, Bengilokhu ngisebenza on nobufakazi eziningi njengoba zamuva, futhi Njengamanje ngivalelwe phakathi nomunye lokho ngenxa out ekuseni kuleli sonto elizayo. Uma Rocket League umkhankaso on the PlayStation Network ngoLwesibili olwedlule, I wakholwa I 'd usinike ukuyivakashela ukumane ukubona ukuthi umqondo uye empeleni yasungula sicabanga ukuthi SARPBC. Rocket League inama ezihlukahlukene tutorials, Nokho Ngaqala ngokumane ukuthola Izilawuli standard and sijule isinyathelo emdlalweni online abayitoho. I elaliya abhanqiwe neqembu abadlali kanye action baqala. Ngasemuva ngidlala komunye umdlalo. Futhi emva kwalokho omunye. Nakuba sisebenzelana nalabo kuzibuyekezo ngase Umane nje ukhulumela, Ngiye wakwazi sokwenza sasivumela kancane Rocket League noma nini lapho kungenzeka, njalo kokuxoxa the abayitoho oyakuzesabisa online for 5 amaminithi mayhem.
Omunye staminas Rocket League enkulu wukuthi kungcono super kusebenziseka kalula futhi ngokushesha fun. Kuba nenhlokomo ngokuphelele njengoba gamers umjaho emhlabeni pitch kuhloswe lokushaya umgomo, Nokho kukhona futhi umuzwa okufanele nobuhlanya. You 'd ngimangaliswe nenani control ungaba sisebenzisa i imoto ukudlala ibhola likanobhutshuzwayo, okusikisela ukuthi kwegazi esimisweni umdlalo ephelele mzuzu angalindelekile emva ngomzuzu okuthakazelisayo.
Ekuphileni soccer isiqophi imidlalo, uma ufisa ukuvimbela shot noma ukudlulisa ibhola enibambisene, wena nje kufanele Thepha thumbstick kulolo bese ucindezela inkinobho. Labo izenzo eziyisisekelo kubonakale like izinto ezifinyelelwe eziphawulekayo Rocket League, njengoba wena ngokuyisisekelo ukulawula unyawo wonke ukuthi kudingeka enze kwenzeke lezo zenzo simple. Odlulayo ukuba uzakwabo, for example, kusho ukuthi kufanele ayobuthana ekahle, hit the turbo ngomzuzu ekahle futhi nithandaze ukuthi inselele akusho azivelanga ukuba Thintathinta inkambo ibhola off.
Ukuthola ukuthi uhlobo umbani esheshayo ezibalweni ekahle ukuze enze umgomo noma (wesilisa mnandi) uvimbele a shot angene umgomo wakho siqu kakhulu sezithandwa iyajabulisa. I angakwenza, kuzwakale ngaphandle, izikhathi eziningana emdlalweni ngamunye, futhi Angisona ngokuvamile ukuthi uhlobo umdlali. Bengilokhu aziswe ukuthi ngineminyaka njengoba bezijabulisa ukujabulela ukudlala umdlalo ividiyo njengoba umdlalo ividiyo ngokwayo, uma enikezela you phi hlobo of inkomba njengoba kuze Antics ukuthi kwenzeke ngenkathi idlala Rocket League.
On top of the izindlela online, ungakwazi ukudlala ngomentshisi endaweni yakho noma dive ibe umdlali isizini full single. Kwaphinda lokho, Angizange ngisho wathinta labo izindlela, Nokho I 'd ufuna Wager ukuthi ungumuntu nje kahle waqoqa njengoba kuvelaphi ukulwa online.
Nakuba udlala, uzoba uthole zonke izinhlobo in-game izinto ezifinyelelwe ngalokho abakufezile yakho ehlukahlukene, lapho ingabonwa a izibalo eziqine page ukuthi ikunikeza rundown wedwa nalokho akufezile futhi, of course, zibalwa and wabaphambili unranked.
Kukhona okuningi okukhona fun ukuvula Rocket League, ukuvumela ukuba guqula umzimba imoto, ngopende umsebenzi, decals, hat (yes, ngezimoto yakho angasebenzisa isigqoko), amasondo, antenna kanye like. Ingxenye best kakhulu, lezi ukushintshwa kukhona yezimonyo kuphela, esikisela ukuthi abadlali bahlale enkundleni ezingeni ukudlala. Lokho balance lwaziswa, njengoba Angikwazi nakanjani ukubona Rocket League sigcine ekubeni eSport osemthethweni. Truthfully, Ngiyacabanga usuku lapho sithola ukubona amaqembu ukuthi baye bagcina ukuba empeleni, empeleni bale video game duke it out in imincintiswano elikhulu.
Ngakho, ukufinyeza, I ngempela, empeleni bathande Rocket League. Konke mayelana umdlalo isiqophi kubonakala sengathi Kwathi nalokho kumnandi kungenzeka engqondweni. Kukhona eziningi amathonya kakhulu, ezixukwini ihlombe Arenas ngaso sonke izikhathi ilungelo, kanye beshaya umgomo ebangela ukwanda ethumela yonke close-by izimoto ezindizayo. Futhi, labo 5 minute emidlalweni qonda zizinhle for the hola eside noma uma uthola nje kancane isikhathi agxumele emzuliswaneni noma 2.
Kulesi sikhathi lapho yayo into engavamile ukubona ummemezeli omkhulu abadelela zabo base fan noma isihloko AAA simazi ezikhishwe nezinkinga aplenty, kungcono ngokuthola umoya oqabulayo ukukwazi ukuba ivuleke into okusheshayo, colorful kanye esihogweni lokunengi kujabulise ukudlala.
Tags: Action, co-op imidlalo, Ezipholile zase Vietnam, endawo co-op imidlalo, imidlalo yabadlali abaningi, Racing, ukubuyekeza, Rocket League, Ezemidlalo	Related Posts:
One comment to Rocket League: Game for Wonke